Nahoana ny Fiteny Matianina no Fiteny?
Ny matematika dia antsoina hoe fiteny siansa. Ilay astronoma sy fizika italianina Galileo Galilei dia nomena tamin'ny teny hoe: "Ny matematika no fiteny izay nanoratan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ." Azo inoana fa ity famintinana ity dia famintinana ny fanambarany ao amin'ny Opere Il Saggiatore:
Tsy azo vakiana [izao tontolo izao] raha tsy efa nianatra ilay fiteny ary nanjary fantatry ny olona izay nosoratany. Voasoratra ao amin'ny fiteny matematika izy io, ary ny litera dia triangolo, boribory ary tarehimarika geometrika hafa, tsy midika hoe tsy azo atao ny manaiky ny teny tokana.
Tena matanjaka tokoa ve ny matematika, toy ny Anglisy na ny Sinoa? Mba hamaliana ilay fanontaniana dia manampy amin'ny fitenenana hoe inona ny fiteny ary ahoana no ampiasana ny voambolana sy ny fitsipi - pitenenana momba ny matematika mba hamoronana sazy.
Inona no atao hoe fiteny?
Misy famaritana marobe amin'ny " fiteny ". Ny fiteny iray dia mety ho rafitra teny na fitsipika ampiasaina ao anatin'ny fitsipi-pifehezana. Ny fiteny dia mety manondro rafitra fifandraisana mampiasa marika na feo. Ny fiteny Linguist Noam Chomsky dia mamaritra ny fiteny ho toy ny sazy fehezina noforonina amin'ny fampiasana singa maromaro. Ny mpahay siansa sasany mino fa ny fiteny dia tokony ho afaka haneho ny fisehoan-javatra sy ny hevitra mifono hevitra.
Ny fepetra rehetra ampiasaina dia misy ny singa manaraka:
Tsy maintsy misy voambolana teny na marika.
Ny dikany dia tsy maintsy mifandray amin'ny teny na marika.
Ny fiteny iray dia mampiasa fitsipi-pitenenana , izay fitsipika iray izay manondro ny fomba ampiasain'ny voambolana.
Ny soritrasa iray dia manomana marika ao anaty rafitra na soso-kevitra.
Ny fitantaràna na ny lahateny dia mifototra amin'ny filaharan'ny soso-kevitry ny syntatika.
Tsy maintsy misy (na efa) vondron'olona izay mampiasa sy mahatakatra ireo mari-pamantarana.
Ny matematika dia mifanaraka amin'ireo fepetra rehetra ireo. Ny famantarana, ny dikany, ny syntax, ary ny fitsipi-pitenenana dia mitovy manerana izao tontolo izao. Ny matematika, ny mpahay siansa ary ny hafa dia mampiasa matematika mba hampitana hevitra. Ny matematika dia mamaritra ny tenany (sehatra iray antsoina hoe metamatemika), fisehoan-javatra eo amin'ny sehatr'izao tontolo izao, ary foto-kevitra mafana.
Ny voambolana, ny fitsipi-pitenenana, ary ny syntax ao amin'ny matematika
Ny teny hoe matematika dia nosoratana avy any ankavia miankavanana, na dia nosoratana havanana na havia na hipoka ny tenin-drazan'ny mpandahateny. Emilija Manevska / Getty Images
Ny voambolan'ny matematika dia misintona avy amin'ny alfabeta maro ary ahitana marika mampiavaka ny math. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra:
Azo lazaina ho toy ny hoe, "Ny telo dia nampiana ho valo miisa dimy."
Ny famakiana izany dia midika hoe:
Ara-baiboly Arabo (0, 5, 123.7)
Firaketana (1/4, 5/9, 2 1/3)
Expressions (3x, x 2 , 4 + x)
Diagram na singa visual (boribory, angona, triangatra, tensora, matrix)
Sary famantarana (i, -i)
Ny haavon'ny hazavana (c)
Ny verbs dia ahitana ny marika:
Ny fitoviana na ny tsy fitoviana (=, <,>)
Hetsika toy ny fanampiny, fanintonana, fampitomboana, ary fizarana (+, -, x na *, ÷ na /)
Asa hafa (sin, cos, tan, sec)
Raha manandrana manatanteraka fehezan-teny ianao ao amin'ny fehezanteny matematika, dia ho hitanao fa misy ny tsimok'aretina, ny fifanoherana, ny teny, sns. Toy ny amin'ny fiteny hafa, ny anjara asan'ny marika iray dia miankina amin'ny teny manodidina azy.
Ny fitsipi-pitenenana matematika sy ny syntax, toy ny voambolana, dia iraisam-pirenena. Na aiza na aiza firenena misy anao na fiteny inona no lazainao, dia mitovy ny rafitry ny fiteny matematika.
Ireo rohy dia vakina avy eo ankavia miankavanana.
Ny alfabeta latinina dia ampiasaina ho an'ny mari-pamantarana sy fari-pahalalana. Amin'ny ankapobeny, ampiasaina koa ny abidy grika. Matetika avy amin'ny i , j , k , l , m , n ny integers . Ny isa marina dia aseho amin'ny a , b , c , α , β , γ. Ny isa feno dia asehon'ny w sy z . Ireo tsy fantatra dia x , y , z . Ny anarana of functions dia matetika f , g , h .
Ny abidy grika dia ampiasaina hanehoana hevitra manokana. Ohatra, λ dia ampiasaina hanondroana ny halavam-pahavelomana ary ny ρ midika dia ny density.
Ny fonon-tseza sy ny fononteny dia manondro ny filaharan'ny fifandraisan'ireo marika .
Ny fomba fiasa, ny integral, ary ny dividy dia voatondro dia fanamiana.
Fiteny amin'ny maha-fitaovana fampianarana azy
Ny fametrahana ny fitoviana dia mitaky fanao. Indraindray dia manampy amin'ny fametrahana sazy amin'ny fiteny natokana ho an'ny olona izany ary handika izany amin'ny matematika. StockFinland / Getty Images
Ny fahatakarana ny atao hoe fehezanteny matematika dia manampy amin'ny fianarana na ny fianarana matematika. Matetika ny mpianatra no mahita tarehimarika sy marika mampihetsi-po, ka mahatonga ny lohahevitra ho mora hatonina kokoa ny fampifangaroana amin'ny fiteny mahazatra. Amin'ny ankapobeny, toy ny fandikana teny vahiny ho fantatra.
Raha toa ny mpianatra amin'ny ankapobeny dia tsy tia ny tenimiafina amin'ny teny, ny famoahana ny anarana, ny matoanteny sy ny fanovana avy amin'ny fiteny miteny / voasoratra ary ny fandikana azy ireo ho dika mitovy amin'ny matematika dia fahaizana manan-danja. Ny olana amin'ny teny dia manatsara ny fahatakarana sy mampitombo ny fahaiza-mamaha olana.
Satria ny matematika dia mitovy amin'ny manerana izao tontolo izao, ny matematika dia afaka maneho amin'ny fiteny manerantany. Teny na fehezan-teny mitovy ny dikany, na inona na inona fiteny hafa miaraka aminy. Amin'izany fomba izany dia manampy ny olona hianatra sy hifampiresaka ny matematika, na dia misy sakana hafa aza.
Ny adihevitra manohitra ny matematika amin'ny fiteny
Andramo ny famaritana ny fitovian'i Maxwell amin'ny fiteny ampiasaina. Anne Helmenstine
Tsy ny rehetra no manaiky fa ny fiteny matematika dia fiteny iray. Ny famaritana ny fiteny "fiteny" sasany dia manoritsoritra azy io ho endrika fifampiresahana. Ny matematika dia karazana fampitam-baovao. Raha toa ka mora ny mamaky teny fanambarana tsotra iray (ohatra, 1 + 1 = 2), sarotra kokoa ny mamaky feo hafa (ohatra, ny fifandraisan'i Maxwell). Ankoatra izany, ny teny lazaina dia omena amin'ny fitenin'ny mpandahateny, fa tsy fiteny manerana izao tontolo izao.
Na izany aza, ny teny mari-pamantarana dia mety ho tsy azo ekena amin'ny alàlan'ity kritika ity. Ny ankamaroan'ny mpandika teny dia manaiky ny tenin'ny tanana ho fiteny tena izy.
> Alan Ford & F. David Peat (1988), Ny Anjara Teny Amin'ny Siansa , fototry ny Fizika Vol 18.
> Galileo Galilei, Il Saggiatore (amin'ny italiana) (Roma, 1623); Ny Assayer, anglisy trans. Stillman Drake sy CD O'Malley, ao amin'ny The Controversy on the Comets of 1618 (University of Pennsylvania Press, 1960).
> Klima, Edward S .; & Bellugi, Ursula. (1979). Ny mariky ny fiteny . Cambridge, MA: Harvard University Press.
Top Colleges ho an'ny Skiing
Ireo singa manan-danja amin'ny Revolisionan'ny indostria any Etazonia
Taratasy amin'ny taratasy fanamelohana ho an'ny fialan-tsiny akademika
Ahoana ny fiasan'ny volkano?
7 Zavatra azonao atao mba hanampiana ireo mpitsoa-ponenana eran-tany
Ahoana ny fomba fitehirizana lokon'ny lokony amin'ny Photoshop
Ohatrinona ny fandaharana amin'ny Internet?
Ny rivo-doza 10 sy ny rivo-mahery indrindra amin'ny tantaran'izao tontolo izao
Sakafo ao amin'ny soda: Fahasalamana momba ny fahasalamana
Inona no atao hoe propagandy?
Ady sy ady nandritra ny tantara
Iza moa ny Dalai Lama?
Famaritana Titration Back
Ahoana ny fampiasana kristaly amin'ny vavaka na fisaintsainana miaraka amin'ny anjely
Ny praiministra John Turner
Tombantombana momba ny taona iray
Tokony hapetraka ao anaty na any ivelan'ny bateria ve ny jiolahy?
Biographie an'i Arthur Miller
Libra amin'ny Fitiavana: Zodiac Compatibility
ANARAN'ANDRIAMANITRA sy ny tantaram-pianakaviana
Avy aiza ny zavatra avy: Rock Materials
Mudras: Ny tànan'i Buddha
Ahoana no fiasan'ny fifaninanana dizitaly?